Umanyolo womhlabathi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | March 2020
Isigaba Umanyolo womhlabathi
Indlela yokutshala nokukhula kwamakhabe
Umbuzo wokukhula kwamakhabezi ezweni uqala ukubaluleka. Le berry iyindlu yokugcina izakhi. Iqukethe amavithamini kanye nezici ezilandelanayo eziwusizo ekushukela kwesifo sikashukela, izifo zesimiso senhliziyo, isibindi nezinso, ungasho ukuthi yisithelo esiphundu kakhulu. Njengakho konke okunye, ikhave ekhulile esakhiweni sakho iyoba nenzuzo kakhulu kunokwathengiwe.
Amalahle njengomanyolo ensimini, ukusetshenziswa komanyolo wokutshala izitshalo
Akuyona imfihlo ukuthi izindlu eziningi zezwe, ngisho nemizi emadolobheni, zisalokhu zithukuthele ngosizo lwesitofu lapho kuphakanyiswa khona izinkuni. Ngenxa yalolu hlelo, umnikazi wepulazi unamalahle amaningi nomlotha, okuvame ukuphuma ngokushesha. Kodwa-ke, amalahle angasetshenziswa njengomanyolo wensimu, ngakho ungavikela indawo kusuka kunokhula kanye nezinambuzane, futhi ulawule umswakama wenhlabathi.
I-Potassium humate: ukwakheka nokusetshenziswa komanyolo
Ukuthobisa ama-salts we-potassium noma i-sodium, etholakala ku-humic acid. I-HUMATE ne-asidi yiyona eyinhloko yomhlabathi, ukugxila kwayo kuyi-humus. Kanti, i-humus inesibopho cishe cishe zonke izinqubo ze-biochemical ezenzeka enhlabathini. Ukwakhiwa kwe-humus kubangelwa ukubola kwezinto eziphilayo, futhi kusuka kuwo ngaphansi kwethonya lamanzi, i-oksijeni nezinsizakalo ezincane, kuyatholakala.
Umanyolo we-nitrojeni: sebenzisa esakhiweni
Umquba we-nitrojeni yizinto ezingavamile futhi eziphilayo eziqukethe i-nitrogen futhi ziyasetshenziswa enhlabathini ukuze zithuthukise isivuno. I-nitrojeni iyisici esiyinhloko sokuphila kwezitshalo, kuthinta ukukhula kanye nokukhula kwesitshalo sezitshalo, zigcwala izici eziwusizo nezomsoco. Lokhu kuyisisindo esinamandla kakhulu esingazinzile kokubili isimo se-phytosanitary yomhlabathi, futhi sinikeze umphumela ohlukile - uma usuqedile futhi usetshenziswa kabi.
"Shine-1": imiyalelo yokusetshenziswa kwesidakamizwa
"Shining-1" ngumkhiqizo wezinto eziphilayo zokubuyisela inhlabathi yokuzala, ukwandisa ukukhiqiza kwezitshalo kanye nezifo zokucindezela. Sizokhuluma ngezinselele zesidakamizwa, imithetho yesicelo kanye nesilinganiso. Luyini ukulungiselela ukukhishwa kwe-Shining-1 okusetshenziselwa nokuthi yini ephumelelayo? Ukulungiselela kusetshenziselwa ukufaka imbewu ehlukahlukene kanye nezitshalo ezimpande zezitshalo ezihlwanyelwe, ukuchelela okunamandla nokudla okungeziwe.